Zithini idatha zerhafu | Ezezimali
Yintoni idatha yerhafu
Encarni Arcoya | 30/09/2021 16:57 | Ukuhlaziywa ukuba 30/09/2021 17:00 | Uqoqosho ngokubanzi
Ukucinga ngoNondyebo kunye noKhuseleko lweNtlalo kwabaninzi ngumzuzu woxinzelelo. Inyani yokwenza into engalunganga ichaza isohlwayo kwaye yeyona nto ingafunekiyo. Enye yezinto ezibalulekileyo kwiinkqubo zezi idatha yerhafu, kodwa zintoni ezo?
Ukuba umbono wedatha yetax awucacanga kuwe kwaye ufuna ukwazi ukuba kufuneka uthathe ntoni malunga nabo, sikunika zonke izitshixo ukuze uziqonde.
1 Yintoni idatha yerhafu
1.1 Idatha yerhafu yomntu
1.2 Idatha yerhafu yenkampani
1.3 Idatha yerhafu kwi-invoice vs taxation
2 Idatha yeyiphi irhafu?
3 Uzifumana njani
3.1 Amanyathelo okutshintsha kwi-Ofisi kaNondyebo
4 Uyikhuphela njani idatha yerhafu kwiminyaka edlulileyo
Into yokuqala ekufuneka uyazi malunga nedatha yerhafu yile nto iyiyo kanye. Uninzi lubabhidanisa nezinye iikhonsepthi yiyo loo nto sifuna ukucacisa umbono wabo kwasekuqaleni.
Kule meko, idatha yerhafu inokuchazwa njenge uthotho lolwazi olwenza umntu (ezizimeleyo, inkampani) inokuhlawula enye. Ngamanye amagama, ezo datha zichonga umntu kwaye, kwangaxeshanye, zibenza basebenzise ezahlukeneyo.
Idatha yerhafu yomntu
Kwaye kunjalo, nokuba ungumntu wendalo, banedatha, eqokelela umvuzo, izinto kunye nedilesi yerhafu yomntu nokuba akazukuyenza invoice ebomini bakhe.
Idatha yerhafu yenkampani
Kuya kufuneka uyazi ukuba ezo nkampani zahluke mpela kwezo "ziqhelekileyo". Ukuqala, i-NIF yenkampani ayizukuba yeyomlawuli okanye umntu ozimeleyo, kodwa endaweni yoko inkampani iya kuba neyayo. Ukongeza, kwezi nkampani kukho ileta phambi kwabo, echaza uhlobo lomsebenzi abasebenza kuwo.
Elinye inqaku eliphambili lale datha kukuba, ngokungafaniyo nezo zangaphambili, idatha yerhafu yenkampani kufuneka icelwe.
Idatha yerhafu kwi-invoice vs taxation
Ngoku ukuba uyazi into yokuba yeyiphi idatha yerhafu, kuya kufuneka wazi ukuba zimbini iindlela ezahlukeneyo. Nangona le sithethe ngayo iyisiqhelo, enyanisweni kukho iikhonsepthi ezimbini ezahlukeneyo ngokuxhomekeke ekubeni zibhekisa kwirhafu okanye idatha yerhafu.
Los Idatha yokuhlawula irhafu ibhekisa kubo bonke abo bachonga idatha ekufuneka zibekwe ukuze zikwazi ukwenza i-invoice, nokuba yinkampani okanye njengengcali. Oko kukuthi, igama nefani, igama lenkampani, i-NIF, idilesi ...
Kwelinye icala, siya kuba nedatha yerhafu, ethi nangona ihlala ifana njengoko besitshilo, ngenene ngeenjongo zerhafu ziqwalaselwe ngenye indlela, njengokuchonga idatha esebenza ukumazi umhlawuli werhafu kwaye simchonge xa ​​efaka irhafu. Kule meko, ayisebenzi kuphela kubasebenzi abazimeleyo kunye neenkampani, kodwa nakubantu bendalo.
Idatha yeyiphi irhafu?
Ngoku makhe sithethe ngokusebenziseka kwedatha. Kucacile, kwinto esiyibonileyo, ukuba kukho idatha yerhafu yomntu ngamnye, yabasebenza ngokukhululekileyo kunye neenkampani. Kodwa nganye inokusetyenziswa okwahlukileyo.
Kwimeko yabantu bendalo, abayi kukhupha ii-invoyisi kwaye abayi kusebenza njenge-freelancer (ngaphandle kokuba benze njalo ekugqibeleni). Kodwa idatha yerhafu ukuya kuthi ga kuloo ndawo Basebenza kuphela ukuze uLawulo lweRhafu, Oko kukuthi, uNondyebo, abe nayo yonke idatha echanekileyo. Kwaye oku kwenziwa kuyilo lweNgxelo yeNgeniso.
Ukuba ungusomashishini okanye umntu ozimeleyo, ukujonga kuthatha enye indlela, ukusukela oko Zisetyenziselwa ukukhupha ii-invoyisi kwabanye abantu abazimeleyo, abantu okanye iinkampani. Ngenxa yoko, oku kufuneka kubandakanywe kwii-invoyisi.
Idatha yerhafu inakho kuboniswane ne-Arhente yeRhafu. Ngokukodwa, kunokwenzeka ukuba ukwenze oko kwiwebhusayithi, ukuzazisa ngenombolo yesalathiso, i-DNI ye-elektroniki, isatifikethi se-elektroniki okanye ikhowudi yePIN. Ezi ziya kufumaneka kwi "Featured procedures", kwaye kufuneka ucofe ku "Bheka ulwazi lwakho lwerhafu".
Emva koko icela ukufaka i-DNI ukuze ikwazi ukufikelela ngePIN khowudi okanye inombolo yesalathiso. Kodwa ungayenza ngenye indlela kwikhonkco.
Nje ukuba ungene ngaphakathi uya kuba nakho ukubonisana nedatha evela kwiArhente yeRhafu ngelo xesha.
Ukongeza kwiwebhusayithi, kunokwenzeka ukuba uqhagamshelane nedatha ngokusebenzisa isicelo se-Arhente yeRhafu kwi-Android ne-iOS. Oku kukuvumela kuphela ukuba uyenze ngenombolo yesalathiso okanye ikhowudi yePIN.
Unenketho yokukhuphela le datha, kwiwebhu nakwisicelo. Ngokwesiqhelo ungayenza ngePDF, kuba yeyona fom ixhaphakileyo kwiArhente yeRhafu.
Amanyathelo okutshintsha kwi-Ofisi kaNondyebo
Kodwa, kwenzeka ntoni ukuba siyaqonda ukuba uNondyebo uneedatha ezimbi zerhafu? Ukuba awuyilungisi kwangexesha, ubeka esichengeni isohlwayo ngokungafumaneki idatha yakho ihlaziywa. Kule meko, ukuba ufumanisa impazamo kufuneka uyiguqule. Kwaye amanyathelo ekufuneka uthathe ukutshintsha idatha yerhafu ngala:
Yiya kwiwebhusayithi yeArhente yeRhafu. Ungayenza ngobuqu, kodwa ihlala ithatha ixesha elide. Kwiwebhu, buqu, kuya kufuneka ugcwalise le fomu 030, ngakumbi "Ukubonisana kunye nokulungiswa kwedilesi yerhafu kunye nedilesi yesaziso (Idatha yam yobalo)".
Ukwenza oku, uyakufuna isatifikethi se-elektroniki, ikhowudi yePIN okanye i-DNI ye-elektroniki.
Nje ukuba ungene ngaphakathi uya kuba nayo yonke idatha uNondyebo anayo ngawe. Kodwa uya kubona ukuba kukho amaqhosha amabini, elinye lelinye "eminye imibuzo" kunye nelinye esinomdla kulo, "Uhlengahlengiso lweDatha".
Betha oku. kwaye kuya kuvela imenu esezantsi: Utshintsho lwedilesi yerhafu, utshintsho kwidilesi yezaziso, ukurhoxiswa kwedilesi yezaziso. Ezinye iinketho ziya kuvela kodwa zezo zinomdla kuthi zezizo sizidwelisileyo.
Emva kokutshintsha idatha, uya kuba nobungqina benkqubo apho umhla kunye nexesha olitshintshileyo idatha liya kuba (kwimeko apho ufumana nasiphi na isohlwayo).
Uyikhuphela njani idatha yerhafu kwiminyaka edlulileyo
Ngamanye amaxesha unako kufuneka ukhuphele ezo zisuka kwiminyaka edlulileyo. Oku kulula kakhulu ukukwenza.
Imodeli yokufikelela kwi-100.
Kweli candelo uza kubona ukuba unecandelo «Imithambo yangaphambili». Kwaye, apho, "iinkonzo zengeniso".
Xa ulapho unokuzikhuphelela ezo kwiminyaka edlulileyo.
Ngaba iikhonsepthi zedatha yerhafu nayo yonke into ebandakanya kuwe icacile?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Yintoni idatha yerhafu
Yintoni idipozithi yebhanki
Yintoni intlawulo eyongezelelweyo yokulingana